Ngwa imewe Apple | Esi m mac
Kedu ihe na-eme na Apple na atụmatụ nke ngwa ya?
Kedu ihe na-eme na Apple na atụmatụ nke ngwa ya? Nkebi ahịrịokwu ahụ nke ọtụtụ ndị ọrụ anaghị ada mbà ikwugharị bụ eziokwu: "Nke a na Ọrụ emeghị"
Ọfọn, taa a ga m eme obere ngosipụta nke ihe a niile ma achọrọ m ịkọrọ gị niile ka ị nwekwara ike inye m echiche gị banyere ihe kachasị ọhụrụ mere na Apple na ndị mere afọ ole na ole gara aga, mgbe Jobs, nnukwu Jobs, di na ulo nkpuru apple.
Iji malite M ga-ekwu nke ahụ ọ bụ echiche onwe onye ma ọ bụ ekele Nke m na-anwa inye echiche m na isiokwu nke na-agagharị na ụbọchị ndị a ugbu a na ụgbụ ahụ mgbe mwepụtara nke ọhụrụ iPhone 6S Smart Battery Case.
1 "Nke a na Ọrụ emeghị"
2 Apple Ngwaahịa
"Nke a na Ọrụ emeghị"
Obi abụọ adịghị ya na Apple bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-enwekarị ezigbo ụtọ ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala, ha nwere ya n'ihe gbasara ngwa ha, mana chere, Kedu ngwa ndị Apple nwere? Ọ na-apụta na Apple gafere oge mgbe ọ nwere ngwa dịka ndị na-ebi akwụkwọ ma ọ bụ ọbụna egwuregwu egwuregwu nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye maara n'ihi oke ihe ịga nke ọma enwetara. Ihe niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa Apple niile rutere na ọpụpụ nke Ọrụ site na ụlọ ọrụ ahụ ma ozugbo ọ banyere, ọ na-ahụ maka ịwụnye ngwa ndị a niile fọdụrụ. O doro anya na, ọzọkwa e guzobere na ụlọ ọrụ ahụ, Ọrụ rụkwara ụfọdụ ngwa ndị dara ada, mana n'oge ndị ahụ ihe ndabere bụ itolite ụlọ ọrụ ma rute ebe ọ dị taa, yabụ ha hapụrụ imepụta na imepụta ngwa nke atọ ndị ọzọ ma ha lekwasịrị anya naanị na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya na ahịa na-eto eto.
Nkọwa ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ na, ọ dị nwute, Steve Jobs enweghị ọmarịcha aha ụwa niile nke ụlọ ọrụ Cupertino nwere taa ma ọ gaghị edo onwe ha n'okpuru "nyocha" nke ụwa niile oge ọ bụla ọ malitere ngwaahịa n'ihi na ụlọ ọrụ ya nọ na-apụ. Kwute "òké bọọlụ" ama ama nke ndị mgbasa ozi niile na-ekwu maka ya maka atụmatụ ya jọrọ njọ ma na ọ bụ mmadụ ole na ole maara na ọ dị adị, Apple USB useké, ma ọ bụghị ngwa ọzọ, ọ bụ naanị òké nwere ọdịdị dị iche ewepụtara na 1998 ma nke ahụ enweghị mmasị na ya.
Ihe m na-ekwu bụ na ọrụ dị ezigbo mma na onye ọhụụ pụrụ iche na anyị agaghị enwe ike ịnụ ụtọ ọzọ, mana echetaghị m ọrụ Apple na-ebupụta ọtụtụ ngwa maka ngwaọrụ ya wee hụ ya niile, dị ka Tim Cook si Apple.
Ọ bụ na anyị kwenyere n'ezie na Apple tufuru ebe ugwu na ngalaba a na ọ na-eme mkpọtụ nke ukwuu? Onwere onye nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na nhazi nke 12 XNUMX MacBook ọhụrụ ahụ jọrọ gị njọ? Ọ bụ eziokwu na ọ bụ usoro imewe na-aga n'ihu na MacBooks yiri ibe ha, mana ọrụ imepụta ahụ dị egwu. Mụ onwe m abụghị onye na-eme ihe dị ọcha ma kama enwere m ike ịsị na m ghọtara obere ihe na ya, mana ọrụ Apple rụrụ na ngwaọrụ ha dị egwu.
Ọ dị mma, ụdị batrị ọhụrụ, nke ọzọ nke iPhone 5c dị n'ụdị chiiz Gruyère dị ọcha (nke natakwara nke ya) ma ọ bụ tinye njikọ Anwansi Anwansi 2 na ala nke ngwaọrụ ahụ nwere ike iwere njehie imewe site na Apple, mana n'ihi nke ahụ anyị agaghị ebibi ọrụ niile Apple na-atụnye na ngwaọrụ ya na-abụghị ngwa. Ọ dị mma ịkatọ ihe niile na ihe niile, ị nwekwara ike ịgbatị ntakịrị karịa n'ihi ọnụahịa nke ngwa ahụ n'onwe ha, mana ịsị na Apple na-efufu ebe ugwu na nsogbu imewe ma ọ bụ ahịrịokwu ahụ "yana Ọrụ ..." na-ewere ukwuu ama, nri ị na-eche
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Kedu ihe na-eme na Apple na atụmatụ nke ngwa ya?
Ma n'ezie ọ tụfuru ya! Cheta ihe kpatara onwonye ihuenyo 3.5 na nkà ihe ọmụma otu aka!? Echetara m na ihe dị mkpa bụ na ọ dị mfe iji, mana ugbu a, ha na-ebugharị OS nke akara ngosi na nhọrọ ndị a na-eme ugboro ugboro! Ikpeazụ m iPhone ga-abụ iPhone 5S na ụbọchị ọ bụ nke nkwado, ma ọ bụrụ na iOS adịghị mma nke ukwuu n'ozuzu m ga-ahọrọ ka ịgbanwee gaa Apple, nke yiri ka ọ na-ata ahụhụ mgbe ọnwụ Ọrụ.
Zaghachi na blindage128@yahoo.com
Cheta na "iPhonazos" nwekwara ike iji otu aka rụọ ọrụ site na iji ihe enyemaka nke Apple mepụtara maka ụdị ndị ahụ, dị ka mmetụ dị nro abụọ na bọtịnụ ahụ home. Ọmụmaatụ.
John Ive gaferelarị onye otu ahụ. 🙂
M tinyere uche m. Kedu ihe na-eme? na ha ga-ebi na usoro ochie nke masịrị ha afọ iri gara aga? Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ugbu a, yabụ na anyị enweghị ike ịkọwa atụmatụ ya ugbu a site na atụmatụ ochie. Ahịrị nke iphone10 ​​na 6S, nhazi nke elekere apụl ... Ha anaghị egosi naanị na ngwa ... Ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ anyị ghọtara na n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ha anaghị apụta maka ezigbo atụmatụ ha. .. Apple na-agbanwe, ọ bụ eziokwu. Ọsọmpi a na-aga n'ihu, na - enweta ọnụ ala dị ala, Apple agaghị ebipụ ọhụụ ya nke 6 afọ gara aga.
Nke ahụ bụ eziokwu ma anaghị m ekwupụta ya ozugbo mana ọ bụ eziokwu, Apple dị ka ọ na-ebi na ụdị atụmatụ ahụ ọtụtụ afọ mana ọ bụkwa eziokwu na ha abụghị atụmatụ ọjọọ na mgbe ụfọdụ mgbanwe mgbanwe nwere ike ibute ọdịda ahịa . Na ihe ị na-ekwu banyere asọmpi Carlos, n'ikpeazụ ha niile na-emecha mepụta ọfụma ma na-eyingomi ibe ha karịa nyocha na ịkwanye R&D nke ha.
Alberto, Jony Ive bi ugbu a nke ọma 😀
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ha mechara i endomi ma ọ bụghị ịgbara ọhụụ, kama mmadụ niile. Apple depụtaghachi otu ihe ahụ ka ọ na-edepụ nke fọdụrụ. Enwere m ike ịsị, na-akwa ụta maka ya ọtụtụ, na ọ na-edepụtaghachi karịa ọ na-agbanwe agbanwe.
Ugboro 65 dijo
Echere m na ịrụ ụka banyere onye na-edegharị onye karịrị karịa. Onye ọ bụla nwere ihe na-atọ ya ụtọ ma na-adọrọ mmasị ya. Ma nke a bụ ezimezi oku; Ọ bụrụ na mmadụ ahụ na ndị nrụpụta nke atọ na-elekọta etu esi arụpụta ngwaahịa na ogo nke ngwaahịa ha ka ọ dabaa na aesthetics nke ngwaahịa ndị mbụ, gịnị kpatara Apple ji tinye sịga sịga n'okpuru mkpuchi? Maka m, ọ dịtụ iche na nke mmadụ na-achọ na ngwaahịa Apple: ọ dị mma, mara mma yana ... (ka anyị hapụ ihe dị ọnụ ala).
Na nke kachasị njọ, mgbe ịzụrụ mkpuchi / batrị site na ika na nke dị na ụdị iOS gbanyụrụ ya ... Ndị ahịa anaghị egbochi ya.
Ọ bụrụ na Ọrụ dị ndụ, nke a ọ gaghị eme? Echere m na nke ahụ bụ ihe onye ọ bụla na-enweghị ike ịza n'ihi na onye ahụ metụtara emetụtaghị anyị, yabụ anyị enweghị ike ikwuchitere ya. Ma anyị nwere ike ikwu maka onwe anyị, na nke a gbasara ... anụ ọhịa ahụ, abụghị ihe m ga-etinye na ekwentị m, na maka otu ihe naanị ... Achọghị m ya.
Ọ bụrụ na ndị ogbenye na-ebili site na ili wee hụ elekere elekere, ọ ga-anwụ ọzọ
Ihe nkpuchi ahu bu FEA, ihe doro anya ma di mfe na ... na ulo oru nke n’eme ka oge nile di nma nke oma na iche iche di iche iche (ya bu ihe mere ha ji gbakwunye onu ahia ya) obu ihe kwesiri rịba ama
Ozi ndi ozo banyere Xiaomi MacBook Air
Walmart Pay, asọmpi ọhụrụ maka Apple Pay